प्रकाश दाहालको ४ बर्ष देखिको सडयन्त्र यस्तो रहेछ, गाउ कै सोझा चुडामणिको श्रीमती मात्र हैन धनसम्पति समेत हडपेको आरोप, जेलबाट निस्किए फुलमालाले स्वागत गर्ने भन्दै सारा गाउले चुडामणिको पक्षमा (भिडियो) «
प्रकाश दाहालको ४ बर्ष देखिको सडयन्त्र यस्तो रहेछ, गाउ कै सोझा चुडामणिको श्रीमती मात्र हैन धनसम्पति समेत हडपेको आरोप, जेलबाट निस्किए फुलमालाले स्वागत गर्ने भन्दै सारा गाउले चुडामणिको पक्षमा (भिडियो)
प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १२:०३
झापा । झापाको दमकका प्रकाश दाहालको आफ्नो श्रीमति स्मारिकासँग विगत ३ बर्षदेखि बोलचाल नभएको पाइएको छ । झापा दमक–१ की टिकामाया पौडेलसँग नजिकको सम्बन्ध भएपछि प्रकाशले कु टपि ट गर्न थालेपछि उनीहरुबीच बोलचाल बन्द भएको हो ।
बोलचाल बन्द भएपनि पटक पटक कु टपि ट गर्न थालेपछि माइती र परिवार पक्षले प्रकाशलाई छुट्टै बस्न भनेपछि चार महिनादेखि घरमा नआएको स्मारिकाले बताइन् । श्रीमति स्मारिकाले धेरै पटक गाउँका मानिस समेत राखेर समस्या सुल्झाउने कोशिष गरिन् तर प्रकाश मानेनन् । उनै महिलाका लागि भनेर श्रीमति छोडेर हिँडे । आफ्नो श्रीमतिलाई वास्ता नगर्ने, भाउजु भन्दै उतै बस्न जानुहुन्थ्यो, प्रकाशको श्रीमतिले भनिन्, मलाई मेरो माइतीले नै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो ।
प्रकाशले दुई छोरा पनि लिएर गएर कोठा भाडामा राखेको उनले बताइन् । ठूलो छोरालाई होस्टलमा राख्ने भनेर लिएर गएको उनको भनाई छ । उनले छोरालाई पनि आफुसंग बोल्न र आउन पनि नदिएको उनको भनाई छ । उनले आफ्नो श्रीमान्लाई भेट्न अस्पताल पनि गएकी छैनन् । टिकामायासंगको सम्बन्ध भएकै कारण आफ्नो परिवार विग्रिएको उनको भनाई छ । फोनमा टिकामायासंग त कुराकानी भएको बताइन् । किन यस्तो कुरा सुनिन्छ दिदी भनेर मैले सोधेको थिए, पौडेलको छोरी भएका कारण मैले दिदी नै भनेर बोले । उनले भनिन् टिकामायाको माइतीले पनि छोरीलाई त्यस्तो नगर भनेर बारम्बार सम्झाएको पनि आफुले थाहा पाएको बताइन् ।
यसै बीच उक्त घ टना बारे स्थानीय वासिन्दाहरुसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस ।
काठमाडौ । आज हामीले केहि दिन अगाडी प्रस्तुतु गरेको घटनाको बारेमा उक्त श्रीमानलाइ फेला पारेको छौ जहाँ यस्तो लफडा परेको छ । काभ्रे स्थायी घर भएका अहिले भक्तपुर सूर्यबिनायक माथि दूधीकोट भन्ने ठाउमा बस्दै आएका यो परिबार अहिले निकै समस्यामा रहेको छ । करिब १८ बर्ष जति भईसक्यो उक्त ठाउमा बस्दै आएको यो परिबार । अहिले एकदमै ठूलो समस्या आएपछि मिडियामा हार गुहार गर्दै आएका छन आमाछोरीनै । पोम प्रसाद गौतमसग बिहे गरेकी दान कुमारी गौतम अहिले बिचल्लीमा परेकी छिन । कमला नाम गरेकी युवती भगाएर हिडेका पोम अर्कैलाई लिएर मात्र फरार भएनन सानै दूधे बालक र २ छोरीलाई पनि बिचल्ली पारे, त्यतिमात्र नभएर नगद रहेको १० लाख रुपैया र ५ तोला सुन पनि लिएर हिडेको श्रीमतीको आरोप छ ।
औधी माया गर्ने आफनै बाबुलेनै यस्तो गरेपछि छोरी पनि चिन्तामा छन । बुवाको कुरा सुन्दा बितिकैनै छोरीको आखाबाट बलिन्द्र आश“ु झरेको थियो । यो घटनाको बिस्तृत बुझदा पहिलेबाटनै उतm युवतीसग अ नैतिक सम्बन्ध भएको र एकचोटी त प्रहरीचौकीमा समेत पुराएको कुरा खुल्न आएको छ । फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस ।
महिलाको तल्लो पेट किन दुख्छ ? सेतोपानी बग्नुको कारण यस्तो छ, डाक्टरको सुझाव हेर्नुहोस (भिडियो)
यस्तोमा खान मन नलाग्ने, तौल कम हुने, थकाइ लाग्ने, अलिकति काम गर्ने बित्तिकै थाक्ने, ज्वरो आउने हुने गर्दछ । यसै बिषयमा हामीले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र साहारा अस्पताल पोखराका प्रसुती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. राजेश अधिकारीसंग महिलाहरुको तल्लो पेट दुख्ने र सेतो पानी बग्ने समस्याको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ । उहाँसंग गरिएको कुराकानी तलको भिडियोमा हेर्नुहोस ।
मृ तक टीका देवीसंग अ नैतिक सम्बन्ध रहेका प्रकाशको श्रीमती आइन मिडिया, वास्तविकता यस्तो रहेछ हेर्नुस् (भिडियो)
झापामा खु कुरी प्र हार गर्दा श्रीमानले श्रीमतीको ह त्या गरेका छन्। खेतमा धान उठाउन जाँदा ३९ वर्षीया टीकादेवी पौडेललाई उनका श्रीमान ४७ वर्षीय चुडामणि भण्डारीले खु कुरी प्र हार गरेका हुन्।
खु कुरी प्र हारबाट टीकादेवीको आइतबार साढे ५ बजेको समयमा घ टनास्थलमै मृ त्यु भएको प्रहरीले जनाएकाे छ। धान उठाउन टीकादेवीसँग झापाकै दमक नगरपालिका-३ का ३५ वर्षीय प्रकाशचन्द्र दाहाल पनि गएका थिए।
प्रहरीका अनुसार चुडामणिले खु कुरी प्र हार गर्दा प्रकाश पनि घाइते भएका छन्। उनको एड्भान्स अस्पताल दमकमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरू जिल्लाकै कमल गाउँपालिका वडा नम्बर-६ मा खेतबाट धान उठाउन गएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चुडामणिलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।
आफ्नो श्रीमतीले प्रकाशचन्द्र दाहालसंग अ नैतिक सम्बन्ध बनाएको कारण यस्तो दुखद घ टना घ टेको छिमेकी र आफन्तले बताएका छन । भाइ बुहारीका अनुसार चुडामणि २२ वर्ष बैदेशीक रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर रहेको र सोहि समयमा श्रीमतीको प रपुरुषसंग सम्बन्ध भएपछि क लह सुरु भएको हो । घ टनाबारे प्रहरीले अ नुसन्धा न थालेको छ।
यसै बीच प्रकाश दाहालका श्रीमती यस विषयमा बोल्न मिडियामा आएकी छन । भिडियो हेर्नुहोस ।
कक्षा ११ पढ्दा पढ्दै केटासंग भागे पछि सपना यसरी सडकमा पुगेकी थिइन (भिडियो)
सोलु सल्लेरी आ’ क्रमणको त्यो रात, आफ्नै पिसाब पियर बाचेका…
दश वर्षे ज’नयु’ द्द सम्झिदा अझै पनि क’हाली लाग्दछ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई र जाङमु शेर्पाको विवाह भएकै दिन मिडियामा…
काठमाडौं,११ माघ। प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मोडलसंग विवाह गर्नै लाग्दा फेरी मिडियामा आइन…
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विवाह गर्ने पक्का
फरार कविताको श्रीमान एक दिनमै सम्पर्कमा आए तर उनले दिएको…
अनलाइन मिडियाको आगमन संगै हिजो आज समाजमा घट्ने हरेक घटनाहरु